Guddiga Joogtada ah ee Guurtida oo Xog-waraysi la Yeeshay Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa – Hargeisa Water Agency
Hargeysa (HWA) Guddiga Joogtada ah ee Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa 24/September/2016 kulan xog-waraysi ah la yeeshay Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahin Siyaad Yoonis shalay, waxayna kala hadleen xaaladda guud ee biyaha caasimadda.
Maareeye Ibraahin Siyaad Yoonis oo ay kulankan ku wehelinayeen qaar ka mid masuuliyiinta Wakaaladda Biyaha, ayaa Guddiga Golaha Guurtidu wax ka weydiiyeen habsami-u-socodka xaaladda biyaha iyo mashruuca biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa.
Ugu horreyn, Guddoomiyaha Guddiga Joogtada ah ee Guurtida Md. Muxumed Aw Axmed oo markii kulanku dhammaaday saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay inay Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa ugu yeedheen, si ay uga xog waraystaan mashruuca biyo-ballaadhinta iyo xaaladda biyaha magaalada.
“Annagoo og dhibaatada biyo la’aaneed ee haysata bushada caasimadda iyo baahida loo qabo mashruucan biyo ballaadhinta Hargeysa oo muddooyinkanba socday, waxaannu guddi ahaan u baahannay in aannu u yeedho Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa iyo hawlwadeennadiisa la shaqeeya. llaahay mahaddii way na soo ajiibeen, waanay noo yimaaddeen, si aannu wax uga ogaanno inta uu soo jiro mashruucii, maadaama biyuhu yihiin daruuri iyo halka xaalku marayo.
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa waa nooga warramay oo qodob-qodob ayuu uga jawaabay su’aalihii xildhibaannadu ka weydiiyeenna mid mid bay uga jawaabay, annagana waxa noo caddaatay oo uu noogu bushaareeyeen in biyihii sannadka 2017-ka horraantiisa magaaladu cabbayso, waanuna kuwa qanacnay,” ayuu yidhi Guddoomiye Muxumed Aw Axmed.
“Waxa noo yeedhay Guddiga Joogtada ah ee Golaha Guurtida, iyaga oo waajibaadkoodii shaqo gudanaya masuulkastana way u jeedhi karaan si ay wax uga waydiiyaan hawlaha qaran ka markaa sidaad wada ogtihiin dhawr iyo labaatankii sanno ee ay Somaliland jirtay caasimadda dhibaato weyn oo xagga biyaha ah baa ka taagnayd.
Nasiib-wanaag waxa socda mashruuc weyn ee biyo-ballaadhinta caasimadda, kaasi oo laba loo qaybiyo mashruuca biyo soo saarka iyo mashruuca biyo qaybinta biyo soo-saarka oo ay isugu tageen Midowga Yurub iyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) oo in muddo ah socday, hawshiisuna gebogebo ku dhawdahay oo badi way dhammaatay ayey xildhibaannadu noogu yeedheen in aannu faahfaahin dheer ka siinno, annaguna warbixin dheer baannu ka siinay halka uu marayo iyo waxa noo qabsoomay.
Waxa kaloo jirta mashruuca biyo-qaybinta oo ay bixsay dawladda Jarmalka baanka u qaabilsan horumarinta oo isagana hawshiisu meel fiican marayso, dhawaana uu bilaabmi doono.” Sidaana waxa yidhi Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahin Siyaad Yoonis oo saxaafadda la hadlay.
Ugu dambeyn, Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa, ayaa xildhibaannada Guddiga Joogtada ah ee Golaha Guurtida ku martiqaaday inay Khamiista soo socota indhahooda ku soo arkaan habsami-u-socodka mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Somaliland.